UKUCHAZA – iAfrika
Uma uphupha ukuthi izandla zakho zingcolile, kusho ukuthi ubhekene nokulingeka ukwenza into embi. Uma zingagcolile nje kuphela kodwa zinamfuka futhi, kusho ukuthi uzohlupheka ngokwezimali ubempofu ngenxa yalento olingekayo ukuyenza. Uma isandla sakho noma iminwe yakho ilimele, uzolahlekelwa umsebenzi maduzane futhi uma umuntu enqume umunwe wakho noma isandla sakho, kusho ukuthi maduzane uzolahlekelwa yinto oyisebenzele kanzima. … Read more
Tags Amaphupho ngeminwe nezandla, UKUCHAZA
Mayelana namaphupho osikweni lwe-Afrika Ukuchaza amaphupho kuyingxenye esemqoka osikweni lwe-Afrika. Umbuso wemimoya uyingxenye yansukuzonke empilweni yemiphakathi eminingi yama-Afrika, futhi ngamaphupho awumongo alombuso. Izincazelo nemifanekiso okwakha izwe lamaphupho kuguquguquke ngokwehlukana kwimifanekiso yaseNtshonalanga, futhi kwenza uhlelo lwezincazelo olunothile noluvusa imizwa. Osikweni lwe-Afrika, amaphupho axhumanisa abaphilayo nokhokho (namadlozi), nokhokho (namadlozi) nabo baxhumana kanjalo nabaphilayo. Kwesinye isikhathi amaphupho anikeza … Read more